बिहीबारका दिन गुरु बृहस्पतिको पूजा गर्नुहोस्, मिल्नेछ यस्तो सफलता ! – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > बिहीबारका दिन गुरु बृहस्पतिको पूजा गर्नुहोस्, मिल्नेछ यस्तो सफलता !
बिहीबारका दिन गुरु बृहस्पतिको पूजा गर्नुहोस्, मिल्नेछ यस्तो सफलता !
admin January 6, 2022 January 6, 2022 जीवनशैली, धर्म सँस्कृति 0
हरेक बार मानिसहरुले विभिन्न देवी देवताहरुको पूजा अर्चना गर्ने गर्छन् । बार अनुसार नै भगवानको पूजा गर्नाले मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास गरिन्छ ।
फेरि गयो दोलखालाई केन्द्रविन्दु सहितको भूकम्प
बिहानै झापाबाट आयो यस्तो खबरः ग्याँस बिस्फोट…
श्री पाथिभरा माताको दर्शन गरि वैशाख १९ गते आइतबारको , तपाईंको राशिफल यस्तो छ जान्नुहोस्
महिलाले लकडाउन तोड्न पुलिसको कारमा नाङ्गै चढेर जे गरिन… भिडियोमे हेर्नुस्